အကျဉ်းထောင်များသို့ ဝင်ရောက် စစ်ဆေးကူညီရန် ICRC ပြင်ဆင် | ဧရာဝတီ
အကျဉ်းထောင်များသို့ ဝင်ရောက် စစ်ဆေးကူညီရန် ICRC ပြင်ဆင်
လင်းသန့်| December 12, 2012 | Hits:146
5 | | နိုင်ငံရေး အကျဉ်းသားတဦးကို အကျဉ်းထောင်အတွင်း၌ တွေ့ဆုံမေးမြန်းနေသည့် ကမ္ဘာ့ကြက်ခြေနီအဖွဲ့ (ICRC) ဝန်ထမ်း နှစ်ဦး (ဓာတ်ပုံ – ICRC)
ဆွစ်ဇာလန်နိုင်ငံ အခြေစိုက် ကမ္ဘာ့ကြက်ခြေနီအဖွဲ့ (ICRC) သည် မြန်မာနိုင်ငံတွင်းရှိ အကျဉ်းထောင်များအတွင်းသို့ ပြန်လည်ဝင်ရောက် စစ်ဆေး ကူညီမှုများ စတင်လုပ်ဆောင်ရန် ပြင်ဆင်နေကြောင်း သတင်းရရှိသည်။
ယခုကဲ့သို့ ICRC ကို အကျဉ်းထောင်များသို့ ပြန်လည် ၀င်ရောက်ခွင့် ပြုခြင်းအား အမေရိကန် သမ္မတ မစ္စတာ ဘားရက် အိုဘားမား၏ မြန်မာနိုင်ငံခရီးစဉ်မတိုင်မီ နိုဝင်ဘာလအတွင်း သမ္မတ ဦးသိန်းစိန် အစိုးရက ခွင့်ပြုခဲ့ခြင်း ဖြစ်ကြောင်း သိရသည်။
အကျဉ်းထောင်များသို့ စစ်ဆေးကူညီမှု မလုပ်နိုင်ဘဲ ၇ နှစ်ကာလကြာပြီးနောက် ICRC အနေဖြင့် ပြန်လည်ဝင်ရောက် စစ်ဆေးရန် ပြင်ဆင်မှုများ လုပ်ဆောင်နေကြောင်း၊ မည်သည့်အကျဉ်းထောင်၊ ရဲဘက်စခန်းသို့ မည်သည့်နေရက်တွင် စတင်မည် ဆိုသည်ကိုမူ မသတ်မှတ်ရသေးကြောင်း ICRC ၏ အရှေ့တောင်အာရှ၊ ပစိဖိတ်ဒေသဆိုင်ရာ တာဝန်ခံ မစ္စတာ Alain Aeschlimann က ပြောကြောင်းICRC ၏ အင်တာနက်စာမျက်နှာတွင် ဖော်ပြထားသည်။
၈၈ မျိုးဆက် ကျောင်းသားခေါင်းဆောင် ဦးကိုကိုကြီးက အကျဉ်းထောင်များအတွင်းသို့ ICRC ပြန်လည် ၀င်ရောက်ခွင့် ရခြင်းကြောင့် အကျဉ်းထောင်များ၏ ကျန်းမာရေး စောင့်ရှောက်မှု၊ အစားအသောက်နှင့် နေထိုင်မှု၊ အကျဉ်းသား မိသားစုများ ထောင်ဝင်စာတွေ့ဆုံရမှု စသည့်ကိစ္စများအပြင် အထူးသဖြင့် နိုင်ငံရေးအကျဉ်းသား အရေအတွက် ဆိုင်ရာနှင့် ပတ်သက်၍ စာရင်းတခုအဖြစ် ပေါ်ထွက်လာနိုင်ကြောင်း၊ ယခင်က အခြေအနေနှင့် နိုင်းယှဉ်ပြီး ဧရာဝတီသို့ ပြောသည်။
“စာအုပ်စာတမ်း ကျနော်တို့ ဖတ်ရှု့ခွင့်ရခဲ့ကြတယ်။ နိုင်ငံရေး အကျဉ်းသားတွေ အတွက်တော့ ဒါဟာ တကယ့်ကို အဖိုးမဖြတ်နိုင်တဲ့ အခွင့်အရေးဘဲ။ နောက်တခါ တမံသလင်းပေါ်မှာ ၉ နှစ်လောက် အိပ်ခဲ့ရာကနေ သစ်သား ကွပ်ပျစ် ရလာတာသည် ကျန်းမာရေးအတွက် တော်တော့်ကို အဆင်ပြေသွားတာပေါ့။ အဲဒီလိုမျိုး အခြေအနေ တိုးတက်လာတာတွေ ရှိပြီးကာမှ ICRC အကျဉ်းထောင်တွေထဲ ၀င်ခွင့်မရတော့ဘူး ဆိုတဲ့အချိန်မှာ ကျနော်တို့အားလုံးက တော်တော်လေး စိတ်ပျက်တာပေါ့” ဟု ဦးကိုကိုကြီးက ဆိုသည်။
မိသားစုနှင့် အဆက်အသွယ် ပြတ်နေသူများအတွက် အဆက်အသွယ် ပြန်လည်ရရှိမှု၊ ကျန်းမာရေးဆေးဝါး ထောက်ပံ့မှု၊ အားကစား၊ စာပေ၊ လူမှု အကူအညီများ ICRC က လုပ်ဆောင်ပေးသဖြင့် အကျဉ်းသား မိသားစုများလည်း အထောက်အပံ့ ရရှိနိုင်ကြောင်း၊ အကောင်းဆုံးသည် နိုင်ငံရေးအကျဉ်းသား အားလုံး ချွင်းချက်မရှိ လွှတ်ပေးလိုက်ခြင်းဖြစ်ကြောင်း သူက ဆက်ပြောသည်။
ထိုင်းနိုင်ငံအခြေစိုက် နိုင်ငံရေးအကျဉ်းသားများ ကူညီစောင့်ရှောက်ရေး အသင်း (AAPP) တွဲဖက် အထွေထွေ အတွင်းရေးမှူး ဦးဘိုကြည်က ICRC အနေဖြင့် ၄င်းတို့၏ စည်းမျည်း စည်းကမ်းများအတိုင်း တိတိကျကျ လုပ်ဆောင်မည်ဟု မျှော်လင့်ကြောင်း၊ သို့သော်လည်း အကျဉ်းထောင်ပေါင်း ၄၂ ထောင်နှင့် ရဲဘက်စခန်း ၁၀၀ ကျော်တို့သို့ မည်ကဲ့သို့ ထိရောက်စွာ သွားရောက် ကူညီနိုင်မည်ဆိုသည်ကို စောင့်ကြည့်ရမည်ဖြစ်ကြောင်း ပြောသည်။
“ICRC က သူတွေ့တဲ့ အကျဉ်းသားတွေကို မှတ်တမ်းတင်လေ့ရှိတယ်။ ဒါပေမယ့် ပြဿနာက သူက အပြင်ကို ထုတ်ပြောလေ့မရှိဘူး။ ဒါကြောင့် ICRC ကနေပြီး နိုင်ငံရေးအကျဉ်းသား အရေအတွက်ကို သိရပါ့မလား ဆိုတာကလည်း နည်းနည်းမေးခွန်းတော့ ရှိမယ်” ဟု သူက ဆိုသည်။
နိုဝင်ဘာလက အစိုးရ၏ ကြေညာချက်အရ ပြန်လည် ဆန်းစစ်ခြင်း ဘုတ်အဖွဲ့တခု (Review Board) လုပ်ရန် စီစဉ်ထားခဲ့ကြောင်း၊ သို့သော် မည်သည့်ပုံစံကိုမူ မသိရကြောင်း၊ ဖြစ်သင့်သည်က အဆိုပါ ဘုတ်အဖွဲ့တွင် ICRC အပြင် အစိုးရ ကိုယ်စားလှယ်၊ နိုင်ငံတကာမှ ကုလသမဂ္ဂမှ ကိုယ်စားလှယ်၊ နိုင်ငံရေးအကျဉ်းသားနှင့် ပတ်သက်၍ ထဲထဲဝင်ဝင် လုပ်နေသည့် အဖွဲ့အစည်း၊ လူပုဂ္ဂိုလ်များ စသည်တို့ ပါဝင်သင့်ကြောင်း ဦးဘိုကြည်က ဆက်လက် အကြံပြုသည်။
“လာဘ်ပေးလာဘ်ယူမှုတွေ၊ နှိပ်စက်ညှင်းပန်းမှုတွေ ရှိနေသေးတယ်။ ဒါတွေ အရင် ရပ်တန့်အောင် လုပ်ဖို့လိုပါတယ်။ အဲဒါတွေ မရပ်တန့်ဘူးဆိုရင် အကျဉ်းထောင် အခြေအနေ တိုးတက်ဖို့ဆိုတာ တော်တော်ခက်ပါ တယ်၊ ICRC ကတော့ သူ့ရဲ့ လုပ်ထုံးလုပ်နည်းတွေနဲ့ ကြိုးပမ်းပြီး ကူညီလုပ်ဆောင်ပေးမယ်ဆိုတာ ကျနော်တို့ သံသယ ဖြစ်စရာမရှိဘူး။ ဒါပေမယ့် အစိုးရက ဘယ်လောက်အထိ လွတ်လွတ်လပ်လပ် လုပ်ခွင့်ဆက်ပေးမလဲ ဆိုတာတော့ ကျနော်တို့ စောင့်ကြည့်ရမှာပေါ့” ဟု ဦးဘိုကြည်က ဆိုသည်။
ယခင်ကလည်း ICRC ကို အစိုးရက အဆိုပါလုပ်ငန်းများ လုပ်ကိုင်ဆောင်ရွက်ခွင့် ပေးခဲ့သော်လည်း ကန့်သတ် ပိတ်ပင်မှုများ လုပ်ခဲ့ခြင်းမျိုး ယခုတခါ မဖြစ်သင့်ကြောင်း သူက ဆက်ပြောသည်။
ယခုကဲ့သို့ ICRC သည် အကျဉ်းထောင်များသို့ ပြန်လည် ၀င်ရောက်စစ်ဆေးမှု လုပ်ဆောင်တော့မည်ကို နိုင်ငံရေး အကျဉ်းသားဟောင်းများ၊ လက်ရှိ ကျန်ရှိနေသော နိုင်ငံရေးအကျဉ်းသား မိသားစုဝင်များက ကြိုဆိုကြကြောင်း သိရသည်။
ICRC သည် မြန်မာနိုင်ငံတွင် ၁၉၈၀ ခုနှစ်လွန် ကာလများကတည်းက မြေမြှုပ်မိုင်းကြောင့် ခြေလက် ဆုံးရှုံးခဲ့ရသူများနှင့် တခြားသော ကျန်းမာရေး၊ လူမှုရေးဆိုင်ရာ လိုအပ်သူများကို အကူအညီပေးခဲ့သည်။
ထို့ပြင် ၁၉၉၉ ခုနှစ်မှ ၂၀၀၅ ခုနှစ်အထိ အကျဉ်းထောင်များသို့ ၀င်ရောက် စစ်ဆေးခြင်း၊ နိုင်ငံရေး အကျဉ်းသားများနှင့် တခြား အကျဉ်းသားများအား နှစ်သိမ့်အားပေးစကား ပြောကြားပြီး လိုအပ်သည့် ကျန်းမာရေး၊ ပညာရေး လူမှုရေး အကူအညီများကို ပေးခြင်းများ လုပ်ဆောင်ခဲ့သည်။
ထိုကာလအတွင်း အကျဉ်းထောင်ပေါင်း ၄၀ ကျော်နှင့် ရဲဘက်စခန်းပေါင်း ၁၀၀ ကျော်ရှိ အကျဉ်းသားပေါင်း ၁ သိန်း ကျော်အား ICRC က တွေ့ဆုံ ကူညီပေးမှုများ လုပ်ဆောင်ခဲ့သည်။
သို့သော် ၂၀၀၄ ခုနှစ်တွင် ၀န်ကြီးချုပ်ဟောင်း၊ စစ်ထောက်လှမ်းရေး အကြီးအကဲဟောင်း ဗိုလ်ချုပ်ကြီး ခင်ညွှန့်နှင့် အပေါင်းအပါများအား ထိုစဉ်က စစ်ခေါင်းဆောင်များက ဖမ်းဆီးအကျဉ်းချပြီးနောက် ၂၀၀၅ ခုနှစ်ကုန်ပိုင်းမှစ၍ အကျဉ်းထောင်များသို့ ၀င်ရောက်စစ်ဆေး အားပေးနှစ်သိမ့်မည်ဆိုပါက စစ်အစိုးရ ကျောထောက် နောက်ခံပေးထားသည့် ပြည်ထောင်စု ကြံ့ခိုင်ရေး အသင်း အဖွဲ့ဝင်များနှင့်အတူ လက်တွဲလုပ်ဆောင်ရမည်ဟူသည့် ကန့်သတ်မှုနောက်ပိုင်း ICRC ၏ လုပ်ငန်းများ ရပ်ဆိုင်းခဲ့သည်။
ICRC သည် အကျဉ်းသားများနှင့်တွေ့ဆုံမှုတွင် အဖွဲ့၏ ဘက်မလိုက် မူဝါဒနှင့်အညီ အကျဉ်းသားတဦးချင်းစီကို လွတ်လပ်စွာ တွေ့ဆုံနှစ်သိမ့်အားပေးသည့်အတွက် ၂၀၀၅ ခုနှစ် နောက်ပိုင်း အကျဉ်းထောင်များတွင်းသို့ ဝင်ရောက်နိုင်ခြင်း မရှိဘဲ ၇ နှစ်နီးပါးကြာမြင့်ခဲ့ရာ နိုင်ငံတကာက အဆိုပါ ကိစ္စအား မြန်မာအစိုးရက ခွင့်ပြုရန် ဖိအားပေး တောင်းဆိုမှုများ ဆက်တိုက် လုပ်ဆောင်ခဲ့သည်။
ICRC သည် ကချင်၊ ကရင် စသည့် လက်နက်ကိုင် ပဋိပက္ခများဖြစ်ပွားရာ ဒေသများတွင် လူသားချင်း စာနာထောက်ထားမှု အကူအညီများ၊ ကျန်းမာရေးနှင့် လူမှုရေး အကူအညီများကိုသာ ဆက်လက် လုပ်ကိုင်နိုင်ခဲ့သည်။
မကြာသေးမီက ရခိုင်ပြည်နယ် ပဋိပက္ခ ဖြစ်ပွားရာ ဒေသများတွင်လည်း ICRC က လူသားချင်း စာနာထောက်ထားမှု အကူအညီများ ပေးခဲ့သည်။
ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည် ငြိမ်းချမ်းရေး နိုဗဲလ်ဆု နှစ်၂၀ ပြည့်ပြီ
စိန်ခေါ်မှုများကို ညှိနှိုင်းအဖြေရှာရေး သမ္မတ ဦးသိန်းစိန် တိုက်တွန်း
ဖက်ဒရယ် တပ်မတော် ဖွဲ့စည်းရေး ချင်းမိုင်တွင် ထပ်မံ ဆွေးနွေး
မလေးရှားရောက် မြန်မာများကို သတ်ဖြတ်သည်ဟု သံသယရှိသူများကို ရုံးတင်
One Response	LeaveaReply Cancel reply	Your email address will not be published. Required fields are marked *Comment Name * Email * Website Sai Linyone December 13, 2012 - 6:29 am	The jailers might move around the prisoners and the jailers might cover up before they arrive. Burmese government is clever like serpents. They cheat and lie the world. They claimed that there was no political prisoner butafew weeks later, they released some of them. Whatalie.